एसईई २०७६: यस वर्षको कोहिले पनि ‘सी’ ग्रेड भन्दा तल ग्रेड नपाउने ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/एसईई २०७६: यस वर्षको कोहिले पनि ‘सी’ ग्रेड भन्दा तल ग्रेड नपाउने !
काठमाडौँ – यस वर्षको एसईई परीक्षामा सबै विद्यार्थीको ग्रेड ‘सी’भन्दा मुनि नआउने देखिएको छ । अधिकांश विद्यालयले गर्ने अन्तिम मूल्याङ्कन हेर्दा सबैले ‘ए’ प्लस देखि ‘सी’ सम्मको गे्रड पठाउने भएका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
परीक्षा रद्ध गरेका कारण अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थीको परफरमेन्सको आधारमा नम्बर पठाउने भएका छन् ।
विद्यालयमा नियमित नहुने र कमजोर विद्यार्थीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने विषयमा सबैले विचार पुर्याउनुपर्ने बोर्डको भनाइ छ । यो वर्ष विद्यालयले पठाएको अंकलाई इकाइले प्रमाणीकरण गरी बोर्डमा पठाउने र बोर्डले ग्रेड कायम गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने भएको छ ।